24 ဧကကျယ်ဝန်းသော မွေးမြူရေးခြံကို ပျားဘေးမဲ့တောအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ကမ္ဘာမြေကို ကယ်တင်နေသည့် Morgan Freeman - ONE DAILY MEDIA
ပြီးခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း၊ လယ်သမားများနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ကမ္ဘာ့ပျားဦးရေ သိသိသာသာကျဆင်းလာသည်ကို သတိပြုမိလာပါတယ်။ US တွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစ၍ စတုရန်းမီတာ တစ်သောင်း (၁-ဟက်တာ) အတွင်း အလုပ်လုပ်သော ပျားအရေအတွက် 90% ကျဆင်းသွားပါတယ် ။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် ၎င်းတို့၏ သဘာဝအလျောက်နေထိုင်ရာနေရာများ လျော့နည်းခြင်းကြောင့် ပျားများဆုံးရှုံးနေရပါတယိ။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး နှုတ်ဆိတ်နေရုံနဲ့ မပြီးနိုင်ဘဲ ပျားတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ အသက်ပြန်သွင်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ နာမည်ကြီးမင်းသား မော်ဂန်ဖရီးမန်းသည်လည်း ဤလူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျားများကို ကယ်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အနှစ်သက်ဆုံး သရုပ်ဆောင်ရဲ့နည်းလမ်းကို သဘောကျကြပြီး သူလုပ်ဆောင်ပုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
– Morgan Freeman သည် ၎င်း၏ Mississippi မွေးမြူရေးခြံကို ပျား‌နိဗ္ဗာန်ဘုံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ပျားလူဦးရေ ကျဆင်းမှုကို ရပ်တန့်ရန် ကြိုးစားနေပါတယ်။
Morgan Freeman သည် US တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပျားအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေဆုံးမှုပြီးနောကမ ၎င်း၏ဝါသနာတစ်ခုဖြစ်သော ပျားမွေးမြူရေးကို ၂၀၁၄ တွင် စတင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ၍ Morgan သည် Arkansas မှ ပျားအုံ 26 အုံ ကျော်ကို Mississippi ရှိ ၎င်း၏ 124 ဧက ကျယ်ဝန်းသော မွေးမြူရေးခြံသို့ တင်သွင်းခဲ့ပြီး Clover ၊ Magnolia သစ်ပင်များနှင့် လာဗင်ဒါပန်းများပါရှိသော ပျားများ၏နိဗ္ဗာန်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။
Morgan Freeman သည် ပျားထိန်းသိမ်းရေးကို ပံ့ပိုးကူညီသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပျားများ အသက်ရှင်နေရန် အရေးကြီးကြောင်း လူတို့အား ပြောပြကာ အသိပညာပေးမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ် ။ “ပျားများကို ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ အလေးထားအားထုတ်မှုတစ်ခု ရှိပါတယ်… ကျွန်ုပ်တို့ သတိမထားမိတာက ပျားများဟာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ ကြီးထွားမှု၊ အသီးအရွက်များ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ် ” ဟု အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဖရီးမန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
– ပျားများရှင်သန်ရန် ကူညီပေးခြင်းက အဘယ်ကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသနည်း??
တောရိုင်းနှင့် အိမ်တွင်းပျားပျားများသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဝတ်မှုန်ကူးခြင်း၏ 80% ခန့်ကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ တွေးကြည့်ပါ- ပျားအသိုက်အဝန်းတစ်ခုက တစ်နေ့လျှင် ပန်းပေါင်း သန်း 300 ခန့် ၀တ်မှုန်ကူးနိုင်ပါတယ်။ ပျားများက ကျွန်ုပ်တို့စားသုံးနေသော သစ်သီးဝလံများ၊ အခွံမာသီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများစုကို ဝတ်မှုန်ကူးပေးကြပြီး အဆိုပါ မယုံနိုင်စရာ အင်းဆက်များမရှိလျှင် လူသားမျိုးစိတ်များ မျိုးသုဉ်းခါနီးထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ပျားများ၏ သဘာဝအလျောက်နေထိုင်မှု လျော့နည်းသွားခြင်းက ပျားအ‌ကောင်ရေကို လျော့ကျစေတာကြောင့် ပျားမျိုးစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ရာ တစ်ဦးချင်းရော အတူတကွ ပါ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
– ဤအဖိုးတန် အင်းဆက်များကို ကယ်တင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီက မိမိနိုင်ရာဝန်ထမ်းနိုင်ပါတယ်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပျားကျဆင်းမှုအား တိုက်ဖျက်ရန် အဓိကခြေလှမ်းများဖြစ်သည့် ပျားသတ်ပိုးသတ်ဆေးကို တားမြစ်ခြင်းကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အရာများရှိပါ သေးတယ်။ ဒေသခံ ပျားများ ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းမှာ echinacea၊ crocus၊ hyacinth၊ calendula နှင့် အခြားအရာများကဲ့သို့ ပျားများ အထူးကြိုက်နှစ်သက်သော ပန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ခြံများနှင့် ဥယျာဉ်များတွင် စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုဆန်းသစ်သော အိုင်ဒီယာတစ်ခုက သင့်အိမ်၊ ခြံဝန်း သို့မဟုတ် ဥယျာဉ်တွင် သီးသန့်ပျားအိမ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် “Bee Brick” ကို တပ်ဆင်ရန် အကြံပြုထားပါတယ်။ ဤဗီဒီယိုတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း အခြေခံပစ္စည်းများမှ DIY ပျားအိမ်ကိုလည်း စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပျားမျိုးများသေနိုင်ခြေရှိကြောင်း သင်သိပါသလား။ သူတို့အသက်ရှင်ဖို့ တစ်ခုခုလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား?
အလှအပစံနှုန်းများကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ခဲ့တဲ့ ရဲရင့်သော မော်ဒယ်လ် (၁၃) ဦး